Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa booru walga’ii idileesaa ni gaggeessa – Fana Broadcasting Corporate
Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa booru walga’ii idileesaa ni gaggeessa
Finfinnee, Fulbaana 28, 2012 (FBC) – Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa booru walga’ii idileesaa ni gaggeessa.
Manni marichaa walga’ii idilee 1ffaa, bara hojii 5ffaasaa booru gaggeessun haasaa preezdaant Saahilawarq Zawdeen sirna baniinsaa Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataa fi Mana Maree Federeeshiniirratti Fulbaana 26,2012 argamuudhan taasisan irratti yaada deeggarsaa dhiyaate ni dhaggeeffata.
Labsii fooyyessa inshuraansii, fooyyessa labsii hojii faaynaansii xiqqaa, baajata deeggarsaa federaalaa, sirna galii waloo, wixinee labsii amala sirreessaa federaalaa, namaan daldaluu fi seeraan ala daangaa ceesisuu ittisuuf ba’an irratti mari’atee koree dhaabbii dhimmi ilaallatuuf ni dabarsaan eegama.
Waliigaltee fi wixineewwan labsii dhaabbilee addaddaa waliin taasifaman ilaaluun koree dhaabbii dhimmi isaan ilaallatuuf ni dabarsaan eegama.
Fooramiin Diinagdee waloo Raashiyaa fi Afrikaa Har’a ni eegala